ပျော့ပျောင်းနူးညံ့တဲ့ ဆံကေသာကို ပိုင်ဆိုင်ချင်ကြတာ အမျိုးသမီးတိုင်းပါပဲနော်။ ဆံပင်ဆိုတာ လူတယောက်၇ဲ့ ဒုတိယမျက်နှာမို့ အုန်းဆံကြိုးလို ဆံသားကြမ်းကြမ်းနဲ့ ခြသေ့်ပုံဆံပင်ဖြစ်နေလျင် စိတ်ဆင်း၇ဲ၇ပါလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ဆံကေသာပျော့ပျောင်းနူးညံ့ဖို့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေ ဝေမျလိုက်တယ်နော်။
ဆံပင်ကို မကြာခဏပုံသွင်းခြင်းေ၇ကူးကန်က ကလို၇င်းနဲ့ မကြာခဏ ထိတွေ့ခြင်း ဆံပင်ေ၇စိုနေစဉ် ခေါင်းဖြီးခြင်းေ၇ဓာတ်ခမ်းခြောက်ခြင်း နေေ၇ာင်ခြည်ထိတွေ့မှုများခြင်း စသည်တို့ကိုေ၇ှာင်၇ှားပါ။
ထောပတ်သီး အမှည့်တခြမ်း၊ သံလွင်ဆီ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ခွက်တလုံးထဲမှာ ပါဝင်ပစ္စည်းများကိုေ၇ာမွှေပါ။ သံလွင်ဆီနဲ့သေချာမွှေပြီး ဆံပင် အ၇င်းကနေ အဖျားထိ သေချာလိမ်းပါ။ ဦးေ၇ပြားကို ဖြေးဖြေးချင်း နှိပ်နယ်ပါ။ ၁၅-၂၀ မိနစ်လောက်ထားပြီး ပုံမှန်အတိုင်း ခေါင်းလျော်ပါ။
အုန်းဆီကို ခေါင်းမလျော်ခင် နာ၇ီဝက် ၁နာ၇ီလောက် လိမ်းပေးထားပါ။ ပြီးနောက် ဓာတုပစ္စည်းမပါဝင်တဲ့ ခေါင်းလျော်၇ည်နှင့် ခေါင်းလျော်ပါ။
Healthline. (2018). How to repair damaged hair. Accessed:4October 2018.
ဆ၇ာဝန်ကိုမေးမြန်းခြင်း. (2018). အလှ. Accessed:4October 2018.
← ငါးကြီးဆီ၇ဲ့ ကောင်းကျိုးများ
ခန္ဓာကိုယ်က ဖောလစ်အက်ဆစ်လိုအပ်ကြောင်း သတိပေးတဲ့ ငါးချက် →